Uncategorized – filazantsaramada
« Fa ianao kosa raha mivavaka, dia midira ao amin’ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao, dia mivavaha amin’ny Rainao, izay ao amin’ny mangingina; ary ny Rainao, izay mahita ao amin’ny mangingina, no hamaly anao. » (Matio 6:6) Amin’ny fifaliana lehibe no ahatsapantsika fa mampianatra antsika hivavaka Jesosy. Tena firaisana amin’Andriamanitra Ray tokoa ny vavaka. Resaka ataontsika …
Continuer la lecture « MANANA FIRAISANA AMIN’ANDRIAMANITRA »
Publié parfilazantsaramada mai 10, 2021 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MANANA FIRAISANA AMIN’ANDRIAMANITRA
ONIN’NY RANO VELONA.
« Izay mino Ahy dia hisy onin’ny rano velona hiboiboika avy ao an-kibony, araka ny voalazan’ny Soratra Masina. » (Jaona7:38) Tena ilain’ny vatan’ny olombelona ny rano, ary mitarika ho amin’ny fahafatesana mihitsy ny tsy fahampian-drano amin’ny vatana. Ny Soratra Masina eto dia miresaka onin’ny rano velona, fa onin’ny rano velona miboiboika avy ao an-kibon’ny olona. Araka ny …
Continuer la lecture « ONIN’NY RANO VELONA. »
Publié parfilazantsaramada mai 3, 2021 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur ONIN’NY RANO VELONA.
« Ny fandresena izay enti-maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. » (1Jaona 5:4) Rehefa maty Jesosy dia reraka ny fon’ny manodidina Azy. Trotraka ny mpianatra, teo koa ny fon’ny reny niteraka, sns…Soa ihany fa natsangana tamin’ny maty Kristy. Velona Jesosy. Velona niaraka tamin’izany fitsanganany izany koa ny finoantsika. Hery entintsika mandresy izao tontolo izao ny finoantsika …
Continuer la lecture « NY FANDRESENA »
Publié parfilazantsaramada avril 26, 2021 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FANDRESENA
JEHOVAH MANDINIDINIKA NY ONDRINY
« Izaho no vavahady; raha izaho no hidiran’ny olona, dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina. » (Jaona 10:9) Tsy foin’Andriamanitra isika ka nanolotra ny tenany Izy ho antsika tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy Zanany. Jesosy Kristy dia milaza ny tenany ho vavahady. Amin’ny lafiny iray dia fanetren-tena avy aminy izany, satria dikaina mandrakariva ny …
Continuer la lecture « JEHOVAH MANDINIDINIKA NY ONDRINY »
Publié parfilazantsaramada avril 19, 2021 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur JEHOVAH MANDINIDINIKA NY ONDRINY
FIADANANA HO ANAREO.
« Ary raha mbola nilaza izany izy, Jesosy nitsangana teo afovoany ka nanao taminy hoe: Fiadanana ho anareo. Dia taitra sady raiki-tahotra izy, satria nataony fa nahita matoatoa izy Nefa hoy Jesosy taminy: nahoana no taitra hianareo? Ary nahoana no miahanahana ny fonareo? Izahao ny tanako sy ny tongotro, fa Izaho no Izy; tsapao Aho, ka …
Continuer la lecture « FIADANANA HO ANAREO. »
Publié parfilazantsaramada avril 14, 2021 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FIADANANA HO ANAREO.
NY ZAVATRA REHETRA DIA HAIN’NY MINO
Perikopa: Marka 9:17-29 «Ary niaraka tamin’izay dia niantso ny rain-drazazalahy ka nanao hoe: Mino aho; vonjeo aho ho afaka amin’ny tsi-finoako.» (Marka 9:24) Jesosy no mitondra amin’ny tenany ny aretintsika. Ny dian-kapoka taminy no nahasitranana antsika. Nomeny fahefana koa ny mpianatra hanasitrana. Mitaky finoana amin’ny mpianatra anefa izany. Mitaky finoana amin’ny marary sy ny tompon’ny …
Continuer la lecture « NY ZAVATRA REHETRA DIA HAIN’NY MINO »
Publié parfilazantsaramada février 26, 2021 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY ZAVATRA REHETRA DIA HAIN’NY MINO